Ọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị Ugboro mbipụta na onye ọrụ chere ihu na-eji ndị iPhone na ọtụtụ ọrụ ọ bụ nnọọ akụda mmụọ. Mgbe ọ bụla nke na-ihu onye ọrụ chere ihu na-esonụ njehie:
E nwere ọtụtụ iri puku forums ebe ọrụ emewo n'aka na ajụjụ a na-abụghị nanị jụrụ kamakwa zara. Ọ bụ n'ezie emetụtachaghị ohere nchekwa nke nke iPhone n'ihi na eziokwu na IOS bụ nnọọ smart na ọgụgụ isi software na ọ dịghị mgbe na-enye ihe ọ bụla njehie ma ọ bụrụ na e nwere ahụhụ na nke na-mgbe kọrọ site na Apple Inc. ya ọrụ na ha na-agwa na ha bụ ndị na ya iji jide n'aka na a mkpebi na-nyere. Ruo ugbu a Apple mgbe agbala ọ bụla e kwuru banyere doro njehie ya kasị eleghị anya ọ bụ a nsogbu na onye ọrụ ọgwụgwụ na ha nwere inyocha ha iDevice n'ihu iji jide n'aka na ihe bụ nsogbu mgbe chere ihu ọzọ na-kpebiri ozugbo o kwere omume.
Method 1: Lelee ezigbo ohere
Method 2: Update iTunes na iOS nsụgharị
Method 3: Lelee nche ntọala
Method 4: Weghachi iPhone na iTunes Alternative
Ọ bụkwa a nnọọ nkịtị usoro iji jide n'aka na ohere na iPhone na-enyocha iji jide n'aka na njehie wepụrụ na usoro Ọganihu n'ihu. Iji jide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-enwetara ọ na-gwara iji jide n'aka na ohere na ngwaọrụ na-enyocha iji na-enweta nsogbu kpebiri ozugbo o kwere omume. Gaa Ntọala> Ozuruọnụ> ojiji ịhụ ókè dị ohere na gị iDevice.
Ọ bụrụ na ndị ohere bụ ezughị, i nwere ike iji aka ihichapụ ụfọdụ achọghị ngwa ma ọ bụ foto gị iphone. Yo nwekwara ike na-eso ndu ebe a iji ohere na gị iphone ma ọ bụ ipad. Ọ bụrụ na e ezu ohere na gị na iDevice, biko na-agụ na na-eso usoro n'okpuru idozi njehie a.
Ọ dị ezigbo mkpa iburu n'obi na ọ bụrụ na ọhụrụ version nke iTunes na iOS na-adịghị arụnyere ọbụna mgbe onye ọrụ nwere ike na-eche ihu nke a nke. Iji dozie nsogbu ọ na-gwara na-eso ntụziaka n'okpuru:
Mgbe ịkwụnye n'ime a ike isi iyi onye ọrụ nwere ka ịnweta ụzọ Ntọala> Ozuruọnụ> Software update. Onye ọrụ ahụ kwesịrị ka enweta "Download na Wụnye"
Na-esonụ window onye ọrụ ọzọ kwesịrị enweta "Wụnye" iji hụ na usoro okokụre:
Nke a njehie ozi nwekwara ike ike mere site iTunes. Wee jide n'aka na ị imelite iTunes inwe a na-agbalị kwa. Na-agba ọsọ iTunes> Pịa Lelee maka Update> Soro kpaliri iji wụnye ọhụrụ version nke iTunes. Ka ọ dịgodị, ị nwekwara ike iwepụ iTunes kpam kpam site na gị na kọmputa na ibudata ọhụrụ version si Apple ukara website.
Method 3: Lelee nche software ntọala
Mgbe ụfọdụ na nche ngwa arụnyere esemokwu na iTunes na-doro njehie nke dị mfe iji dozie dị ka onye ọrụ dị nnọọ mkpa iji jide n'aka na ndị na-esonụ usoro a soro na-arụpụta ihe kasị mma:
Ụbọchị, oge na oge mpaghara ntọala ndị na-emelitere ma ọ bụrụ na ha na-adịghị ziri ezi.
Ọhụrụ version nke iTunes bụ na-arụnyere n'elu kọmputa
The windows ma ọ bụ Mac OS ga-emelite mgbe nile
Ndị ọhụrụ nche kwachie maka nke atọ ọzọ nche software ga-arụnyere.
Usu faịlụ na Mac na windows ga-enyocha iji jide n'aka na ha na-adịghị na-akpata nke.
Ọ bụrụ na niile n'elu kwuru banyere ịgba akwụkwọ ada mgbe ahụ, ọ na-atụ aro iji jide n'aka na nche software nkwarụ n'oge nweta nkwalite usoro iji dozie nsogbu ahụ.
Method 4. Weghachi iPhone na iTunes Alternative
Nọmalị n'elu ụzọ pụrụ inyere gị aka idozi njehie ozi "Ọ bụghị Enough Space on iPhone iji weghachi ndabere" mgbe ị na-agbalị iji weghachi itunes ndabere ka gị na iDevice. Ọ bụrụ na mwute ikwu na ọ na-adịghị, ebe a anyị nwere ike ikwu na ị na onye ọzọ ngwá ọrụ iji wepụ itunes na nkwado ma weghachite ya ọ bụla nke gị idevcies- Wondershare Mobiletrans.
Nzọụkwụ 1: Họrọ iTunes ndabere.
Mepee Wondershare Mobiletrans na kọmputa gị, pịa Weghachi si Backups na isi window na họrọ iTunes si ndabere nhọrọ. Usoro ihe omume ga delect niile itunes backups na kọmputa gị na-akpaghị aka.
Nzọụkwụ 2: Jikọọ iOS ngwaọrụ.
Jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa na iji USB cables. Nọmalị Mobiletrans ga-amata ya dị ka iche na ekwentị.
Nzọụkwụ 3: Họrọ faịlụ na-amalite na-ebufe.
Họrọ faịlụ site na iTunes ndabere ị ga-achọ nyefee. Pịa Malite Nyefee na usoro, ọ ga-enyere gị nyefee niile faịlụ na ị họrọ ka lekwasịrị ekwentị n'ime nkeji ole na ole.
> Resource> iPhone> Quick Idozi 'Ọ dịghị Enough Space on iPhone iji weghachi ndabere'